Wasaarada arimaha haweenka, caruurta iyo Dhalinyarada JDFI iyo xafiiska arimaha aweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI oo tababar muddo 2 bilood Socon doona uga Furay Maanta Magaalada Jigjiga 200 oo Haween ah. - Cakaara News
Wasaarada arimaha haweenka, caruurta iyo Dhalinyarada JDFI iyo xafiiska arimaha aweenka caruurta iyo dhalinyarada DDSI oo tababar muddo 2 bilood Socon doona uga Furay Maanta Magaalada Jigjiga 200 oo Haween ah.
Jigjiga(CakaaraNews)Talaado Oct 29,2013.Si loo hirgaliyo Qorshayaasha GTP iyo MDG ee ku wajahan Dhanka kor u qaadida aqoonta iyo xirfadaha Dumarka islamarkaana loo dhimo saboolnimada si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka ayaa waxaa ay xukuumada fadaraalka iyo xukuumada DDSI ay wadajir u dajiyeen qorshayaal xirfad shaqo iyo fursado shaqo loogu abuurayo Dumarka aan lahayn aqoon iyo xirfad ay ku xoogsadaan.
Hadaba xukuumada fadaraalka iyo xukuuamda deegaanka oo ka duulaya hirgalinta qorshayaasha loo jeexay kor u qaadida xirfadaha aqooneed ee dumarka DDSI ayaa waxay iyaga oo gacan ka helaya ama kaashanaya midowga Reer-yurub tababar ugu qabteen maanta hoolka shirarka xafiiska haweenka 200 oo ka mida haweenka iyo dhalinyarada Deegaanka ah kuwaasoo laga soo xulay 10ka xaafadood ee ay magaalada jigjiga ka kooban tahay,tabarkaas oo sida la sheegay socon doona 2bilood. furitaankii tababarkan ayaa ay maanta ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka arimaha haweenka,caruurta iyo dhalinyarada ee DFI marwo firenash makuriya,wasiirada Arimaha Haweenka,Caruurta iyo Dhalinyarada DDSI marwo raxma suldaan maxamuud haybe,ku-xgeenka xafiiska Aimaha Haweenka,Caruurta iyo Dhaliyarada DDSI Mudane Rashiid Bacdaar, madaxa xafiiska mayorka magaalada jigjiga mudane c/casiis,gabdhaha loo furay tababarka iyo waliba marti sharaf kale.
Waxaana tababarkaasi furitaankiisii ugu horayntii ka hadashay wasiirka arimaha haweenka,caruurta iyo dhalinyara ee DDSI marwo Raxma maxamuud haybe oo ugu horayntii siwayn ugu mahadnaqday masuuliyiinta ka socday wasaarada arimaha haweenka ee heer-fadaraal si wayna ugu soo dhawaysay shalay garoonka diyaaradaha garaad wiil-waal iyadoona marwo Raxma si faah’faahsan uga hadashay qorshayaasha horumarineed ee JDFI iyo kuwa xukuumada DDSI ee ku wajahan Dumarka,sigaarana uga warantay qorshayaasha xafiiska arimaha haweenka DDSI iyo wada shaqaynta fiican ee ay la leeyihiin wasaarada heer-fadaraal ee arimaha haweenka iyo hay'adaha deeqda bixiya.
sidoo kale waxay wasiiradu sheegtay in xafiiskeeda oo kaashanaya xukuumada deegaanka iyo wasaarada heer-fadaraal ee arimaha haweenka ay siwayn u hirgaliyeen xidhmaha horumarinta dhalinyarada iyo haweenka Deegaanka.
Dhanka kale Marwo Raxma waxay siwayn uga warbixisay ahmiyada uu tababarkan maanta u leeyahay haweenka iyo dhalinyarada loo furay tababarkan kuwaasoo mudada uu tababarkani socdo ay ku qaadan doonaan ayay tidhi casharo la xidhiidha Dhanka Aqoonta iyo Xirfadaha loogu abuurayo Fursado shaqo ay ku daboolaan nool maalmeedkooda si loo dhimo saboollnimada iyo Shaqo la'aanta iyadoona tababarkani uu u sahli doono haweenka fursado iyo xirfado shaqo ay ku shaqaystaan mustaqbalka dhaw iyo kan dheerba.
Waxayna sheegatay wasiiradu in ay baran doonaa xirfadaha ay ka mid ka yihiin barashada samaynta tuunbooyinka biyaha iyo xirfada qurxinta iyo ranjiyaynta guryaha kuwaas oo marka ay dhamaystaana lays kugu xidhidoono ururo iskaashatooyin ah sidaasina ku helidoona shaqo abuur iyo Dhigaalba ayay tidhi. ugu danbayntii ayaa ay si wayn ugu boorisay hablahan uu tababarku u furmay maanta in ay si wanaagsan ugu faa’iidaysaan mudada uu socto dhanka kalana Macalimiinta tababarkan bixinaysa kula dardaarantay in ay u hagar baxaan Bixinta tababarkan.
Waxaa kale oo iyaduna ka hadashay furitaankii tababarkaasi ku xigeenka wasiirka wasaarada arimaha haweenka ee DFI marwo firenash makuriya iyada oo ugu hoyntii u mahadnaqday sidi diiran ee loogu soo dhaweeyay xarunta deegaanka ee jigjiga ayaa waxay sheegtay in uu deegaanka siwayn ugu talaabsaday sanadahan ugu danbeeyay horumar xawliya, waxana sheegtay wasiirad ku xigeenka in ka wasaarad ahaan iyo DFI ay siwan ugu warhayo guulaha waawayn ee ay xumuuda DDSI soo hoysay, waxaa ka leh oo ay sheegtay si uu dalka ugu midnoqdo wadama uu dhalaalahoodu dhex dhexaadka yahay mihiimtahay in siwayn loola dagaalamo dhimista saboolnimada islamarkaana kor loo qaado ilaha shaqo abuurta waxaya sheegtay wasiiradu in ay wasaarada arimaha haweenka ee heer dafaraal iyo midowga yurub ay markii ay arkeen dadaalada dheeriga ah ee ay xukuumada deegaanku ku tabaalsa sanadahan ugu dabeeyay ayaa waxan go’aansanay in aan siwayn uga hirgalino arimaha horumarka waxayna sheegtay in tababarkan u furmay 200 ee gablaha ku dhaqan caasimada deegaanku yahay tababar u muhiin u ah horumarinta xidhmaha haweenka.
Tababarkan oo socontooma mudo 2 bilood ah oo maanta ka furmay hoolka xafiiska arimaha haweenka ayaa waxa la filayaan marka ay dhamaystaan hablahani uu ay siwayn uga faa’iidaysandoonaan islamarkaana ay uga faa’iidaydoonaan shacabkooda